Ivano-Frankovsk - Study muUkraine. Ukrainian Munopinda Center
Ivano-Frankivsk, ndiro guta guru Ivano-Frankivsk Oblast riri kumavirira muUkraine. Ndicho guta zviduku rine vanhu nehasha 205,000 vanhu. Kukura guta chete kunowedzera ayo wemashiripiti.
Ivano-Frankivsk akatanga upenyu sezvo nhare iyo yakavakwa kudzivirira Polish-Lithuanian Commonwealth kubva akadzokorora wechiTatar yaingopambwa. Nhare racho rakabudirira uye hazvina refu guta-nhare asati akatanga kukura pasi vakachengeteka inopiwa rusvingo urwu. Wakatanga anotaurwa munhoroondo 1662 apo akapiwa muMagdeburg kodzero. Guta akapfuurira kupona kwete chete wechiTatar kurwisa asiwo avo chezano pamusoro payo nokuda nechisimba Turkish uye Russian masimba. The Renaissance aiva nguva zvakawanda kukura uye kuvakazve, izvo kutungamirira wokuva zvishoma kupfuura wakajeka guta. Kutaura zvazviri izvozvo akawana Nick-zita 'shoma Leopolis’ - Leopolis ari zita rechiLatin Lviv. Zvakanga panguva nenguva ino kuti Ivano-Frankivsk, Ukireni, akazova muzinda Armenian tsika.
Mushure Poland yakakamurwa pakati 'Partitions wePoland', Ivano-Frankivsk akauya pasi yeAustria pokutonga asati achiwira pasi umambo pamusoro zvionera Umambo Galicia uye Lodomeria. 1919 yaiva nguva inovhiringidza yokuti Ivano-Frankivsk sezvo yaiva nyaya zhinji skirmishes Polish-Ukrainian. It pakupedzisira vakaguma sezvingave Second Polish Republic, somurongi Stanislawow Voivodship guru. pakupedzisira, mu 1939 zvakanzi nechisimba mauto eGermany uye Soviet uye akanga dzakabatanidzwa wokuUkraine SSR. Zvakawanda vechiJudha akaurayiwa munguva yevaNazi basa, iyo yaiva inosuruvarisa zvikuru nguva muguta munhau.
pakupedzisira, mu 1962, zita akazonzi Ivano-Frankivsk pashure wokuUkraine munyori Ivan Franko. Kuma1990 akazviona kuva mumwe nzvimbo wokuUkraine rusununguko rwokufamba. Nhasi guta anomuka muchizvikudza wayo kodzero. It iguta rakanaka pamwe chete nhoroondo akunda uye kusuruvara izvo zvinofadza kuongorora uchifanira kuva nguva. Wadii kushanyira Ivano-Frankivsk nguva inotevera muri muUkraine uzive chii chinofanira kuuya pachako?
Last update:15 Chikumi 19